Aqoonta ilaalinta cudurka faafa ee dadka qaar horeyba usocdaan ama dhawaan shaqada aadayaan, cudurka dillaaca hada waa inuu sameeyaa? 1. Sida saxda ah ee loo xidho maaskaro qalliinka lagu tuuro inta shaqada lagu gudajiro
In laga adkaado cudurkaan faafida iyo xakamaynta dagaalka, qodobka ugu muhiimsan waa “ka hortag”
waxaa maamula 20-05-19
In laga adkaado cudurkaan faafida iyo xakamaynta dagaalka, qodobka ugu muhiimsan waa “ka hortag”. WHO ayaa ku dhawaaqday cudurka cudurka hurgunka ee coronavirus inuu ku faafo “aafada faafa”. Maaskaro yar-yar ayaa soo jiidatay balaayiin qof oo adduunka ah. Maskaxda ka dambeysa waa silsilad wax soo saar iyo wax soo saar oo dhameystiran i ...
n95 ka hortagga maaskaro
Dhaq gacmahaaga ka hor inta aadan xirin maaskaro ama iska ilaali taabashada gudaha maaskaro si aad u yareyso halista sumowga. Kala sooc gudaha iyo dibedda maskiinka, sare iyo hoosta. Ha u isticmaalin gacanta inaad ku masaxdo maaskaro, Maska N95 wuxuu kaliya ka takhalusi karaa fayraska maaska-dusha, haddii ...